केहि समय अघि एक जना केटासंग यौन सम्पर्क भयो तर विहे भने अर्कैसंग गर्नु पर्ने भयो, मैले पहिलेनै सेक्स गरेको उसले थाहा पाउछ होला त्यसैले कसरी भर्जिन हुने ? « Sajha Page
केहि समय अघि एक जना केटासंग यौन सम्पर्क भयो तर विहे भने अर्कैसंग गर्नु पर्ने भयो, मैले पहिलेनै सेक्स गरेको उसले थाहा पाउछ होला त्यसैले कसरी भर्जिन हुने ?
प्रकाशित मिति: December 3, 2017
प्रश्न: म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटासाथीसँग धेरै पटक यौनसम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले उसले मलाई छोडेको एक वर्ष भयो । मेरो परिवारबाट अर्को केटासँग विवाह गराइँदैछ । म भर्जिन छैन । त्यसैले मैले यौन सम्बन्ध राखेको थाहा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? मेरो भनाइको अर्थ फेरि भर्जिन हुन के गर्नुपर्ला
कुनै पनि व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राख्नु नै कौमार्य भङ्ग हुनु हो । अहिले कस्तो किसिमको यौन क्रियाकलापलाई यौनसम्पर्क मान्ने अनि कस्तोलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । केटीका लागि कुमारित्व र केटाका लागि कुमारत्व शारीरिक कुरा मात्र होइन, भावनात्मक कुरा पनि हो । लिङ्ग प्रवेश नभै यौन उत्तेजक रूपमा यौनाङ्गमा हात तथा औंलाको भरपुर प्रयोग गरेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुरालाई के भन्ने ? जस्ता प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । जैविक रूपमा यौनसम्पर्कको अनुभवहीनता नै कौमार्य भङ्ग नहुनु अर्थात् कुमार वा कुमारी हुनु हो । धेरैजसो स्थितिमा कौमार्य भङ्ग हुने कुरा किशोरी वा युवतीको वा भनौं महिलाको सन्दर्भमा गरिन्छ । त्यसैले होला, कुनै विवाहित दुलहीको कौमार्य परीक्षण गर्ने अनेक उपाय गरिए पनि विशेष गरेर महिलाको योनिच्छद दुरुस्त छ कि छैन भन्ने कुरा विभिन्न परिस्थितिमा भर पर्ने गरेको पाइन्छ ।
तपाईंले पहिलेको प्रेमीसँगको जीवनलाई त्यहीं छोडेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । जे–जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसको सामना गर्न आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । आफूले यौनसम्पर्क राखेको कुरा थाहा पाइएला भन्ने कारणले विवाह नगर्ने सोच बनाउनु उचित होइन । विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गरेकै भरमा विवाहित जीवन नचल्ने होइन, अन्यथा पुनर्विवाह गर्नेहरूको जीवन जहिले पनि दु:खद हुने थियो । कुनै यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएका कारणले शारीरिक रूपमा यौनसुख लिनेदिने कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने पनि होइन । यदि असर पर्छ भने मनोसामाजिक रूपमा । अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क गरेको थाहा हुनुलाई धेरैले अप्रिय मान्छन् । यस्तो कुरा यौनाङ्गको स्वरुप हेरेर होइन, कसैले भनिदिएर थाहा
पाइएको देखिन्छ ।
(कान्तिपुर साप्ताहिकको सहयोगमा)